ညီလင်းသစ်: ကန်ဘေးက တနင်္ဂနွေ
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.3.11
သားသားက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ကြီးလာရင် လူချောလေးဖြစ်မှာပဲ။ ရေကန်ကြီးက သာယာလိုက်တာဗျာ။
haha သဘောကျလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ် ပုကျိကွေးလေးက မင်္ဂလာပါ နေကောင်းလားပြောတော့ အံ့သြသွားတာ နည်းနည်းပါးပါး တတ်သားပဲး)။
ပါပါး ပါပါး လို့ ခေါ်တဲ့ ပြုံးစိစိ ပြောတဲ့ပုံလေးက ချစ်စရာကောင်းပါ့ ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုရေ ။
သားလေးရဲ့  ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုပြကွက်လေးကို
၁၀ မိနစ်စာ ( ၃ ကြိမ် ) ကြည့်သွားပါတယ် .. သားလေးဗမာလိုဆိုတတ်တာ အဖေအသင်အပြကောင်းလို့နေမယ် ... သားလေးက စကားတွေပြောတတ်နေပြီနော် ( diaper စလေးတော့ တွေ့လိုက်မိသလိုဘဲ :p ) သားလေးရဲ့  တိုးတက်မှုလေးတွေကို အဆင်ပြေသလို တင်ပေးပါဦး ညီလင်း ရေ ....
ကကြီး ခကွေး ရော ရေးတတ်လား
သားလေးကချစ်စ၇ာကောင်းလိုက်တာနော်။ မောင်လေး၇ဲ.ဗီဒီယိုအခွေကိုကြည်.ပြီး တစ်ချိန်တုန်းကေ၇ာက်ခဲ.တဲ. ဂျာမနီနယ်စပ်မြို.လေး( ဆွစ်ဇလန်ဇူးရစ်နဲ.လည်းနီးတယ်)ကို သတိ၇နေလေရဲ.
ရေကန်ကြီးကလဲ အရမ်းသာယာ ...
သားလေးကလဲ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်း ...
သားလေး စကားပြောတာက မပီကလာလေးနဲ့ ချစ်စရာလေး ... သဘောကျလို့ ၂ ခါပြန်ကြည့်သွားတယ်။ ငန်းကြီးတွေကလဲ လှလိုက်တာ ... ကြည့်ရတာနဲ့ကို စိတ်ထဲ ကြည်နူး ချမ်းမြေ့မိတယ်။
သားလေး သီချင်းဆိုနေတာ ချစ်စရာလေး.. ဆိုနေရင်းမေ့သွားပုံရတယ်..ပါးပါးဆိုပြီးမေးလိုက်တာလား... ပြီးတော့ ပါးပါး ..ပါးပါး..ဆိုပြီးခေါ်နေတာ...မပီကလာနဲ့ ချစ်စရာလေး ...
လောကကြီးက တယ်သာယာပါလားလို့ ခံစားရပါတယ်။
တကယ်ပြောမယ်ဆို သူက ပြောနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ပျင်းနေတာဗျ၊ ပြီးတော့ မြန်မာလို ပြောရတာ ကျနော် တစ်ယောက်ထဲနဲ့ဆိုတော့..၊ ဒီမှာက တခြား မြန်မာမိသားစုတွေ လည်း သိပ်မရှိတဲ့အပြင် နေကြတာ လည်း ဝေးကြတယ်၊ စကားမစပ် ရောင်စုံဘောလုံးနဲ့ ကားကြီးတက်မယ်ကို ရောချပြီး ဆိုသွားတဲ့ သီချင်းလေးက သားရဲ့ အလွဲလေးတွေ နားထောင် ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ညီ့အတွက်...၊ :D
diaper စလေးတောင် တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်သေး တယ်ဆိုတော့ တော်တော် မျက်စိလျင်တာပဲ၊း) သူ မြန်မာစကားပြောတတ်ဖို့ ကျနော်က နောက်ဆုံးခံတပ် ဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် သင်နေ၊ ပြောနေတာ ပါပဲဗျာ...၊
အမည်ဝှက်စာဖတ်သူ (၁) ...
အမည်ဝှက်စာဖတ်သူ (၂) ...
တတိယမြောက်စာကြောင်း အကြိုက်ဆုံးပဲ..အဟဲ၊ နောက်တာပါဗျာ၊ လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ရောင်စုံဘောလုံးနဲ့ ကားကြီးတယ်မယ်ကို ရောချလိုက်ပြီးတော့ ဘယ်ဟာကဘာ ဆိုတာ သူ မေ့သွားလို့ “အဲဒီပြီးတော့ဘာလဲ” လို့ မေးလိုက်တာ..၊
နောက်ထပ် လှတာ ရှိသေးတယ်၊ ကင်မရာ နောက်မှာရပ်နေတဲ့ တစ်ယောက်လေ..ဟားဟား၊ ခံစား ကြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျို့...။
သာယာ လိုက်တာ ကိုညီလင်းရေ... ရေကန်ကြီးရယ်၊ ဘဲငန်းလေးတွေရယ်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိသားစုလေးရယ်။ ဘ၀က ပြီးပြည့်စုံ သွားပြီ။ ကိုညီလင်း သားသားက လူချောလေးနော်။ ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။ သားသား ပြောတဲ့ မင်္ဂလာပါ၊ နေကောင်းလား၊ (နောက်ဆုံး သားသား ဆိုတာ ရောင်စုံ ဘောလုံး သီချင်း ထင်တာပဲ) ဆိုတာလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းလို့ ခဏ ခဏ ပြန်ကြည့် မိတယ်။ ဗွီဒီယိုမှာ ထည့်ထားတဲ့ စန္ဒရားသံ လေးကလည်း နားထောင် ကောင်းတယ်။
ဒီကွန်မန့်ကို ပြုံးရွှင်စွာ ရေးပါတယ်။ :))
"မင်္ဂလာပါ။ နေကောင်းလား" ပြောတတ်တဲ့အပြင် "ရောင်စုံဘောလုံး" သီချင်းလေးလဲ ဆိုတတ်နေတာပဲ။
အခုလို ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီ Video Clip လေးကြည့်ပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ကွန်မန့် မရေးတော့ပါဘူး။
vous voyez en été.
Aunt နန္ဒာ xoxo
Cette vidéo me rend heureuse. A propos, votre fils est tourjours mignon!!!
ပါပါး ပါပါး နဲ့ ခေါ်နေတာလေးက တကယ်ကို ချစ်စရာ...
နောက်လဲ အခုလို သားသားပါတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ပါအုံး...း))
သားက သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ်...။ ကြီးလာရင်လည်း ထူးချွန်ထက်မြက်မှာ သေချာတယ်...။ သားရတနာပေါ့...။
အခု video ထဲကနဲ့ စကိတ်စီးတဲ့ပုံနဲ့ တော်တော်ကွာနေသလိုဘဲ..။ ဟိုမှာက ငယ်ငယ်လေး... ။
သားအမိနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ပြီး မနှစ်က နှင်းဝေတဲ့ဆောင်းထဲက နောက်ဆုံးပုံလေးကို တောင်သတိရသွားတယ်..။
သာယာနှစ်လိုဖွယ် ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ..၊
ဒီကွန်မန့်ကို ပြုံးရွှင်စွာ ရေးတယ်ဆိုတော့ အရင် ဘယ်ကွန်မန့်တွေကိုများ စူပုပ်ပြီး ရေးသွားပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေတယ်...ဟားဟား၊ နောက်တာပါ၊ ကျေးဇူး..၊
လာလည်တာရော၊ ကွန်မန့်လေးအတွက်ပါ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ဗျာ...၊
Merci pour ces mots sympas. Tu es gentille comme toujours.
ကျေးဇူးပါ၊ နောက်လဲတင်ပါဦး ဆိုတော့ ငိုချင်ရက် လက်တို့တော့ ဖြစ်နေပြီနော်...ဟင်းဟင်း၊ :D
အင်း..စကိတ်စီးတဲ့ ပုံက ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံး အပတ်ထဲမှာ ရိုက်ထားတာ၊ ဒီဟာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က၊ ကျနော်သူ့ကို ဟော်မုန်းတွေ အကျွေးများသွား လို့ ၂ လအတွင်း ထွားလာတာ ထင်တယ်...ဟားဟား၊ နောက်တာပါဗျာ၊ အငြိမ်ဓါတ်ပုံဆိုတော့ perspective ကွာသွားလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်..၊
ဟုတ်ကဲ့... ပြောလိုက်ပါ့မယ်၊ ကျေးဇူးပါ..၊
Yes,awinter Sunday in spring outfit... :D
It'sabeautiful day!! Any tips for him to speak Burmese? My gal is21/2 yrs old. she would understandalittle Burmese when I speak to her. she wouldn't say it except for grandparents, Chit Chit and little heart. I am trying to teach her body parts now. She confused Nose and forehead. :-)
သားသား စကားပြောတာ ချစ်စရာလေး။
ရောင်စုံဘောလုံး...ဘေးကိုဖယ် ဘေးကိုဖယ် :P
ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းမြေ့လွန်းလို့ နောက်တခေါက် ထပ်လာကြည့်သွားတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ ...
ပထမကွန်မန့်ထဲ ပြောဖို့ ကျန်သွားတာလဲ လာဖြည့်ရင်း ဆိုပါတော့ ... ။
ရေကန်ပြီးရယ် .. သားသားရယ် ... ဖန်တီးသူရယ်ပဲ ချီးကျူးစကားဆိုရသေးတယ် ... သားသားရဲ့မေမေ၊ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ မအိမ်သူကို ရေးဖို့ကျန်သွားတယ်။
သားလေးနဲ့ အတူ ကစားပေးနေတဲ့ မအိမ်သူရဲ့ မျက်နှာမှာ မိခင်တယောက်ရဲ့ အကြင်နာငွေ့တွေလွှမ်းပြီး ချောမောလှပနေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ... .....
Sint Si ...
As you might know already, one of the best ways forachild to learnalanguage, is to listen toaconversation. As for me, I don't have that opportunity. So, I simply talk to him as much as I can all the time since he was born. Besides, I interpret to him on purpose what his mom says as if he didn't understand French. For instance, when his mom says,"come and have breakfast, little son", I'd interpret instantly "သား...မေမေက မနက်စာ လာစားတော့-တဲ့". I find it lets him learn and memorize in parallel both usages. Just my two cents. :)
ဟုတ်တယ်၊ သူက မြေဓါတ် ယူနေတာ...၊ :)
ဘော်လုံးတွေက သူ့မြင်ကွင်းကို ပိတ်နေပုံရတယ်..း)
ပြောလိုက်ပါ့မယ်၊ သူ ဝမ်းသာသွားမှာ သေချာတယ်၊ မမေရဲ့ မျှတပြီး ခံစားနားလည်ပေးတတ်တဲ့ အဲဒီ စိတ်ကလေးက လှတယ်၊ ကျေးဇူး......။
ရေကန်ကြီးကို သဘောကျလိုက်တာ တစ်ခြားရေကန်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ရေကန်အစပ်ဟာ မြေပြင်မဟုတ်ပဲ ကျောက်စရစ်လေးတွေ ဖြစ်နေတာ.. သိပ်လှတာဘဲ
ကန်ထဲက ငွေငန်းဖြူတွေထင်ရဲ့ အဲဒီအကောင်တွေကလည်း ရေကန်ကို ပိုလှအောင် တန်ဆာဆင်ပေးထားသလိုပါဘဲ.
အားလုံးခြုံပြောရရင် သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေးပါဘဲ..ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကူးစက်သွားတယ် တကယ်
သားလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ...
တစ်ခါမှ comments မချန်ဖူးပေးမယ့် အစ်ကို့စာတွေကို အမြဲအားပေးလျက်ပါ
ဒီနေ့ သားလေးရဲ့ အသံကြားလိုက်ရတော့ မရေးဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး.. :)
Star Dreamer ...
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကူးစက်သွားတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါ တယ်ဗျာ..၊ ငန်းတွေက လူတွေနားကို လာလာပြီး အစာတောင်းတတ်တယ်၊ မကုန်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကို လူတွေက အမြဲသွားသွားကျွေးတော့ လူမြင်တာနဲ့ အစား တောင်းတော့တာပဲဗျ၊ ကန်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ တချိန်လုံး ရှိနေကြတယ်..။
While u were replying comments on friday morning,i was watching the video.I repeatedly watched n appreciated it even i didn't have time to leave comment.I shared with my whole family today.I know ur effort for this post.Tks for sharing.
Thank you so much for your appreciation as usual. Happy to know that you share it with you family. I appreciate your comments, too. :)
Romantic Video clip and poetic post..
ကလေး က အဖေတူလို. ထင်တယ် အရမ်းချောတယ်။း) ကလေး ကို မြန်မာစကား တက်စေချင်တယ်။
အမည်ဝှက်စာဖတ်သူ (၃) ...
အခုမှ အကြောင်းပြန်ရလို့ ဆောရီးပါဗျာ၊ ဖြစ်ပုံက ဒီကွန်မန့်က spam ထဲကို ရောက်နေခဲ့တော့ မသိလိုက်ဘူး၊ မနေ့ကမှ သွားမြင်လို့ ပြန်ထုတ်လာခဲ့ တာ၊ ပထမဆုံး မန့်သွားတဲ့ ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ပြောနေပါတယ်၊ အမှန်က “ကလေးက အဖေ မတူလို့ထင်တယ်” လို့ ဖြစ်ရမှာဗျ...။း)
ရောင်ဂျုံဘောလုံး ရောင်ဂျုံဘောလုံး... :)
Your son is very cute. What is his name ?He can even sing Burmese nursery song.
did you teach him? I was surprise that you(as father)can teach him to speak in Burmese. I thought only Burmese ladies are able to stay closely with their kids and teach them. Anyway Glad to hear and read your blogs.
ပထမ မိခင်နဲ့ သားငယ်လေးရဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ထုံလွှမ်းနေတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေးကြည့်နေတာ....။
ရာသီဥတုက သာသာယာယာ၊ မိခင်ရဲ့ အလိုလိုက်ကြင်နာမှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သားငယ်လေး
ရုတ်တရက်...သားငယ်လေးရဲ့ မပီကလာ နဲ့ ကဗျာလေး ရွတ်သံကို ကြားရတော့ အံ့သြစိတ်နဲ့ ချစ်မြတ်နိုးနိုး ကြည့်မိတယ်
ကြည့်စမ်း..ပါပါ လို့ ခေါ်လိုက်သေး
အားပါးတရ အားပေးသွားပါတယ်ရှင်း)))